Dollar Sign In Your Eyes? - Nanolabs Blog
ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ ဈေးရောင်းဖို့က အဓိကအရေးပါတာလား။ ဈေးရောင်းတာ အရေးပါတာပေါ့ အပိုဝင်ငွေတွေ အမြတ်တွေရချင်လို့ပဲ ဈေးရောင်းနေကြတာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပဲအတင်းထိုးရောင်းတော့မှာလား? အဲ့ဒါဆို များများရောင်းနိုင်လေ မြတ်လေလား မေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းမဖြေခင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် customer ဘက်က တချက်လောက်စဉ်းစားကြမယ်နော်။ Shopping Market တွေမှာဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ အရမ်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့တယ် အရောင်ရှိမရှိ၊ ဆိုဒ်ရှိမရှိ မေးချင်တယ် ဒါပေမဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းစီကနေ ဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကြည့်ကလွဲလို့ ဘာဝန်ဆောင်မှုမှမရခဲ့ဘူး။ အဲ့အချိန်ကျရင် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်မလဲ Online ကနေပစ္စည်းမှာတယ် ပိုက်ဆံပေးချေပြီး ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အချိန်ထိ အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် မှာထားတဲ့ပစ္စည်းမှာ အပျက်အစီးနည်းနည်းပါခဲ့တာကို ရောင်းသူဘက်က တာဝန်မယူတဲ့အပြင် ရှင်းပြမှုပါမရှိခဲ့ဘူး။
အဲ့အချိန်မှာရော ထပ်ဝယ်ဖို့ခံစားချက်ဖြစ်ပါဦးမလား လူတွေကပစ္စည်းကြိုက်လို့ ဝယ်တာထက် ဝန်ဆောင်မှုကြိုက်လို့ဝယ်ကြတာပါ ပစ္စည်း တစ်ခုမဝယ်ခင် ဘယ်ဆိုင်က ဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းလဲ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းချနေတဲ့သူလား ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူလား ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ဘယ်ရာထူးမှာပဲလုပ်ကိုင်နေနေ စိတ်ထဲမှာကပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ပေးနိုင်ရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းရေရှည်ခံမှာပါ ဘယ်လောက်များများရောင်းရသော်လည်း တခြားပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ယှဉ်တဲ့အခါ အမြဲနောက်ကျကျန်နေသေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အရောင်းဆိုသည်မှာလဲ အရောင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကုမ္မဏီတစ်ခုလုံးရဲ့ CEO ကအစ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူအထိ အကုန်လုံးကအရောင်းဝန်ထမ်းတွေပါပဲ။ ကိုယ်ရချင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုပေးရင် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှု တိုးရုံသာမက ကိုယ်စီကိုပဲပြန်လာကြမှာအမှန်ပဲမဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့် ဈေးပဲထိုးရောင်းနေတာထက် ခဏလောက်အချိန်ပေးပြီးစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ သူ့ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်ပြီလားပေါ့ အဖြေက NO ဆိုရင်တော့ ပင်ပန်းပါတယ်လေ အလုပ်လုပ်မနေပါနဲ့တော့၊ အိမ်ပဲပြန်အိပ်လိုက်တော့။
By Mei #
We’re tech startup for tech startups.
At NanoLabs, we are Mission-Driven, People-Focused. We apply startup-style customer development and agile engineering for new products and areas of business from concept to launch.
Nanolabs Co., Ltd.
Building A-8, Room 101, Shwe Kabar Housing, Mindama Road, Yangon.
Phone: (+95) 9696933889
Copyright ©2021 Nanolabs Co., Ltd. All rights reserved.